R/wasaarihii hore Farmaajo: Puntland guusha ay gaartay waxaa u suurto-galiyay waa Isku-duubnida shacabka iyo Dowladda. – Radio Daljir
R/wasaarihii hore Farmaajo: Puntland guusha ay gaartay waxaa u suurto-galiyay waa Isku-duubnida shacabka iyo Dowladda.
Maarso 22, 2016 8:19 g 0
Nairobi, March, 23, 2016 – R/wasaarihii ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray shacabka iyo madaxda dawladda Puntland, waxaana dagaalkii ay Al-shabaab la galeen uu ku tilmaamay guul taariikhi ah.
Mudane Farmaajo ayaa guusha Puntland sabab uga dhigay isku-duubinada shacabka iyo dowladda Puntland, waxaana uu hadalkiisa raaciyay dhaliil xooggan oo uu u jeediyay madaxda DF oo uu ku eedeeyay in aysan daacad ka ahayn Al-shabaab in ay ka sifeeyaan dalka Soomaaliya.
Mudane Farmaajo waxaa kale uu ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya, gaar ahaan abaayo iyo siyaasadda. Waxaa waraysigaan la yeelatay wariye Faadumo Taxadar oo ka tirsan Radio Daljir
Hoos ka dhagayso Waraysigii Farmaajo.
Madaxweynaha Somaliya oo lagu wado in uu Puntland Yimaado